पत्नीसहित बिहे पार्टीमा पुगेका मोहनविक्रम सिंहमाथि लाग्यो यस्तो बात, के हो वास्तविकता ? — Sanchar Kendra
पत्नीसहित बिहे पार्टीमा पुगेका मोहनविक्रम सिंहमाथि लाग्यो यस्तो बात, के हो वास्तविकता ?
काठमाडौं । नेकपा मसालले आफ्ना महामन्त्री मोहनविक्रम सिंह र सिंह पत्नीसमेत रहेकी सांसद दुर्गा पौडेलले नेपालका लागि भारतीय राजदूत मञ्जिवसिंह पुरीसँग भेटवार्ता नगरेको बताएको छ । मसाल प्रवक्ता रामप्रकाश पुरीले विज्ञप्ति जारी गर्दै सिंहले राजदूतसँग भेटेको भन्ने समाचार कलोलकप्लित र झुठो भएको स्पष्ट गरेका छन् । विज्ञप्तिमा एउटा विवाह भोजमा निीहरुसको राजदूतसँग देखादेख मात्र भएको तर, कुराकानी नभएको उल्लेख छ । ‘मोहनविक्रम सिंह र दुर्गा पौडेल प्यूठानका गोविन्द पोखरेलका छोराको विवाहमा गएका बेलामा त्यहाँ भारतीय राजदुत पनि आएका थिए । कार्यक्रमपछि भर्याङतिर जाने बेलामा भर्याङको मुखमा सिंह र पौडेल समेतको भारतीय राजदूतसँग देखाभेट भएको कुरा सत्य हो । त्यो बेला विवाहमा आएका अरू १५ \_२० जना मानिसहरू पनि थिए । तर, त्योबेला परस्परमा परिचय गर्ने वा कुराकानी गर्नेसमेत कुनै कार्य भएको थिएन ।’
विज्ञप्तिमा सामान्य देखाभेटलाई आधार बनाएर कतिपय अनलाइन र पत्रपत्रिकाले दुईघण्टासम्म राजदूतसँग गोप्य कुराकानी भएको र दुर्गा पौडेललाई मन्त्री बनाइदिनका लागि मोहनविक्रम सिंहले अनुरोध गरेकाृे भन्ने समाचार कपोलकल्पित र निराधार भएको बताइएको छ । यस्तै विज्ञप्तिमा महामन्त्री सिंहले प्रधानमन्त्री भएपछि केपी ओलीलाई नभेटेको र पत्निलाई मन्त्री बनाइदिन आग्रह नगरेको पनि मसालले स्पष्ट गरेको छ । सिंह पत्नि दुर्गा नेकपाको समर्थनमा प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भएकी थिइन् । यसैबीच नागरिक दैनिकले समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टीबीच एकीरकण प्रक्रिया भित्रभित्रै धेरै अघि बढेको समाचार लेखेको छ । तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरम नेपाल र नयाँ शक्ति पार्टीबीच एकीकरण गरी सबैलाई चकित पारेजस्तै समाजवादी र राजपाबीच जतिसक्दो चाँडो एकीकरण गरी चकित पारेर देखाउन दुवै पार्टीका नेताहरूले औपचारिक–अनौपचारिक वार्ता अघि बढाएका छन्।
दुई पार्टीबीच एकीकरण प्रक्रिया अघि बढेको समाजवादी पार्टीका महासचिव रामसाह यादवले पनि बताए। ‘दुइ पार्टीबीच एकीकरण प्रक्रिया औपचारिक–अनौपचारिक रूपमा अघि बढेको छ। यसका लागि विभिन्न तहमा छलफल भइहेको छ,’ उनले भने। एकीकरण प्रक्रियाको नेतृत्व गरिरहेका दुवैपक्षका शीर्ष नेताहरू भने एकीकरण प्रक्रियाबारेमा धेरै बोल्न चाहन्नन्। राजपाका अध्यक्षमण्डलका एक सदस्य भन्छन्, ‘अहिले सबै कुरा बाहिर ल्याउने हो भने एकता भाँड्न सुरु हुन्छ। हुन लागेको एकता पनि बिग्रन्छ। त्यसैले यसबारेमा केही नभनाै।’